चाया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? थापा पाउनुहोस् चाया पर्‍यो भने के गर्ने ? | Safal Khabar
चाया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? थापा पाउनुहोस् चाया पर्‍यो भने के गर्ने ?
विहीबार, ०६ फागुन २०७७, ११ : ०७
काठमाडौं । जाडो मौसममा कर्मचारी विद्यार्थी तथा घरबाहिर काममा निस्कनुपर्नेहरुमा सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, चाया । घरबाट बाहिर निस्कनासाथ कोरेको कपालबाट बुरुरु कपडामा चायाँ झर्ने गर्दछ । यस्तोमा धेरैलाई जाडोयाम शुरु भएसंगै यसले सताउने गर्दछ ।
चाया आउनु सरुवा रोगको लक्षण होइन । सेतो धूलोको कणजस्तै देखिने चाया एक प्रकारको टाउकोको निर्जीव छाला हो, जुन कपालको जरा छेउछाउमा जम्मा हुन्छ । कपाल किरेटिन नामक प्रोटिनले बनेको हुन्छ । विभिन्न संक्रमण, रोग जस्ता कारण बाहेक टाउको राम्ररी सफा नहुदा चायाँ आउने गर्दछ ।
कपाल राम्ररी नधुँदा, टाउकाको छालामा फोहोर र प्रदूषणका कारण एक किसिमको पत्र जम्न थाल्दछ । यसले टाउकाको छालाको रोम छिद्रलाई बन्द पारिदिन्छ । चायाका कारण टाउकाको छाला रुखोसमेत हुन्छ र बढी मात्रामा चिलाउँछ ।
सामान्यतः चाया कम गर्न एन्टिफंगल स्याम्पु उपयोगी मानिन्छ । यस स्याम्पुलाई करिब पाँच मिनेटसम्म पानीमा भिजेको कपालमा लगाएर राख्नुपर्छ । यसपछि पानीले धुनुपर्छ । स्याम्पु लगाएलगत्तै पानीले कपाल धुँदा चाया घट्दैन ।
यसका लागि एक सातासम्म निरन्तर कपाल धुने गर्नु पर्दछ । पछि सातामा दुई पटकसम्म स्याम्पु गर्ने र कपाल धुने गर्नु पर्दछ । यसले बिस्तारै चाया कम हुँदै जान्छ । यदि यसो गर्दा समेत चायाको समस्या नहटे छाला सम्बन्धी अन्य रोग हुने सम्भावना भएकाले छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनु पर्दछ ।